Ny haavon'ny fiarovana amin'ny Mac dia tsy ekena ankehitriny hoy i Craig Federighi | Avy amin'ny mac aho
Craig Federighi, filoha lefitra zon'ny Apple Engineering Software, dia nanambara tamin'ny fitoriana teo amin'ny Apple sy Epic Games fa ny haavon'ny fiarovana misy ao amin'ny iOS dia avo lavitra noho ny amin'ny macOS. Amin'izao fotoana izao dia sarotra ho an'i Apple ny hahatratra ny sakana fiarovana napetraky ny iPhone, ohatra, momba ny Mac. Manome tsiny azy amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo.
Tamin'ny fitsarana ny Lalao Apple vs. Epic izany dia mitranga amin'izao andro izao, mahita fanambarana tena mahaliana avy amin'ireo vavolombelona manatrika ny Fitsarana izahay. Amin'ny andro farany fivoriana, Craig Federighi, Filoham-pirenena lefitra misahana ny lozisialy momba ny lozisialy ao Apple. Ity farany dia nampandre ny Fitsarana fa tsy mety raha manana fitaovana hafa misintona ny fangatahana antoko fahatelo toa ny Mac ny fitaovana hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny rafitra fiarovana ananan'ireo Mac dia tsy manakaiky ny fiarovana apetraka amin'ny iOS. Macs, manana macOS ary natao ho an'ny fikirakirana maimaimpoana ho an'ny mpampiasa, tsy hevitra tsara ny mamorona magazay izay dinihin'ny mpikambana ao amin'ny Apple ny fampiharana rehetra. Sady tsy mety no tsy hahomby. Izany no antony ahazoan'ny mpampiasa maro misintona ny rindranasa amin'ny antoko fahatelo nefa tsy mandalo ny fibaikoan'ny orinasa paoma.
Inona no dikan'ity?. Amin'ny ankapobeny, tsy azo antoka izany fa rehefa misintona rindrambaiko ivelan'ny Mac App Store ianao dia tsy voan'ny malware izany. Ny haavon'ny filaminana azo antoka izao ho an'i Craig Federighi, amin'ny Macs tsy ekena. Na izany aza, ny fampiharana finday dia manintona kokoa ny mpanao heloka bevava, noho izany ny haavon'ny filaminana dia tokony ho avo kokoa. Izany no antony tsy tokony handefasanao ny rindrambaiko amin'ny iOS. Fa azo ekena amin'ny macOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny haavon'ny fiarovana amin'ny Mac amin'izao fotoana izao dia tsy ekena hoy i Craig Federighi
Apple dia manamarina ireo ambaratonga telo mahatonga ny Apple TV 4K vaovao vidiny € 199